rivotra rafi-masoandro mifangaro ho an'ny an-trano sy ny ara-barotra - Ningbo Haitiana Nihazonako Group Co., Ltd
Rivotra masoandro Hybrid System
Industrial rivotra turbine 10kw-50kw output
Kiritika rivotra turbine 100-1000W output
Residential rivotra turbine 1kw- 5kw output
PV Grid mifatotra inverter
PV Junction boaty
Wind Grid amin'ny maso
Wind Solar mifangaro dovia-maso
Wind masoandro mifangaro tie Grid inverter
PV fitomboan'ny System
Wind fitomboan'ny System
Ary mbola hanohon Lever tilikambo
Guyed Wire tilikambo
rivotra rafi-masoandro mifangaro ho an'ny an-trano sy ny ara-barotra
Araka ny manam-pahaizana maro ny angovo azo havaozina, kely "mifangaro" rafitra herinaratra izay Mitambatra rivotra sy ny masoandro (photovoltaic) teknolojia manome tombony ny maro, na tokan-tena system.In be ny toerana, rivotra hafainganam-pandeha ambany amin'ny fahavaratra, rehefa mamiratra ny masoandro mamirapiratra sy lava indrindra. Ny rivotra dia hihahery amin'ny ririnina, rehefa tsy hazavana est disponible. Satria ny tampon'isan'ny fotoana fandidiana ho an'ny rivotra sy ny masoandro rafitra mitranga amin'ny fotoana samy hafa ny andro sy ny taona, safiotra rafitra no mamokatra kokoa hery rehefa mila izany.
System dia ahitana:
1. PV Array: Maro ny PV kobany mifandray amin'ny andian-dahatsoratra sy / na eo amin'ny mifanitsy manome DC Output avy amin'ny zava-nitranga irradiance. Orientation sy Jery mitongilana ireo kobany ireo masontsivana endrika manan-danja, ary koa ny zavatra manakatsakana shading amin'ny manodidina.
2. Wind turbine: Izany dia nametraka teo an-tampon'ny tilikambo avo be iray, manangona kinetic angovo amin'ny rivotra, sy niova fo izany ho herinaratra izay mifanaraka amin'ny rafitra an-trano ny herinaratra.
3. Hybrid-maso:-maso bateria banky fiampangana sy manefa ny antonony sy ny fiarovana.
4. Battery banky: mety ho iray na maro bateria vatoaratra nifandray miaraka mba hamorona iray lehibe indrindra bateria ny takiana malefaka sy DIEM-ora fahafahana. Misy fomba ny bateria fanahafana sy ny fahaiza-manao manan-danja indrindra dia ny fanapahan-kevitra herinaratra mba hanao, ary safidy tsara dia afaka manampy manome antoka ny famatsiana ny herinaratra tapaka hery ary koa ny rafitra izay tsotra sy ny miasa hatrany.
5. Inverter: A fahefana mpanova izay ° inverts ± ny DC hery avy kobany ho any AC hery.
6. entana: mijoro ny tambajotra mifandray fitaovana ao an-trano izay sakafo avy amin'ny inverter (AC entana), na avy amin'ny bateria banky (DC entana).
Matihanina famolavolana sy fanamboarana In PV Solar Energy & Wind-Solar Hybrid System.